10 ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကင် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ > 10 ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကင်
သင် steakhouse ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုကြားရတဲ့အခါ, ချက်ချင်းသင်အမေရိကန်သို့မဟုတ်ဥရောပတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, ဤရွေ့ကားကျွဲနွားနောက်ကွယ်မှနှင့်ကင်စားသုံးရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာများမဟုတ်ပါဘူး. Wagyu နှင့် Kobe, အရာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမဲသားဖြတ်တောက်မှုစဉ်းစားနေကြသည်, ဂျပန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, ပေါ်တူဂီနှင့်အာဂျင်တီးနားကဲ့သို့သောနေရာများကိုအထူးဖော်ပြသင့်သည်.
ဒေသတစ်ခု၏မြက်ကျွေးသောနွားများသည်ထိုဒေသနှင့်ထူးခြားသောအရသာရှိလိမ့်မည်. သူကပြောပါတယ်ဘဲလျက်, အမဲသားကိုအများစားသူများအတွက်အသားညှပ်ဖြတ်သောအရာသည် go-to option ဖြစ်သည်. ငါတို့သည်ဤစာရင်းကိုပြုစုပြီးပြီ 10 ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကင်, သင်၏အရာဖြစ်သင့်သည် ပုံးစာရင်း အကင်ကမင်းအကြိုက်ဆုံးအစားအစာထဲကတစ်ခုဆိုရင်.
၁. Goodman အကင်, လန်ဒန်
ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကင်တွေထဲမှာ, Goodman သည်နယူးယောက်မြို့မှဖြစ်သည်. Goodman ကလန်ဒန်ဌာနခွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 2008, နှင့်ထိုဂိမ်းကိုအစဉ်အဆက်ကတည်းကနောက်ထပ်သုံးနေရာအထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်.
ဒီစားသောက်ဆိုင်ကို Michelin Star ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီးနယူးယောက်ခ်ရဲ့အရေပြားနဲ့သစ်သားအသံအနိမ့်အမြင့်များကြောင့်၎င်းအားနာယကများကနှစ်သက်ကြသည်. ဖောက်သည်များသည်စပိန်နိုင်ငံမှရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, သို့မဟုတ်အမေရိကန်ဖြတ်တောက်. စားသောက်ဆိုင်ကသူ့အသားကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီးနံရိုးမျက်လုံးကိုဂုဏ်ယူတယ်.
2. Mancy ရဲ့အကင်, တိုလီဒို
Toledo ရှိ Mancy's Steakhouse, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, ဒဏ္legာရီတည်ထောင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါ steakhouse အတွက်တည်ထောင်ခဲ့သည် 1921 နှင့်, ဒေသခံတွေယုံကြည်ခံရဖို့ရှိပါတယ်လျှင်, နေ့ကတည်းကထုပ်ပိုးခံရဖို့ဆက်လက် 1, ပင်တနင်္ဂနွေပေါ်မှာ. စစ်ဆေးဖို့အကြံပေးတယ် Toledo ရာသီဥတုရေဒါ အပြင်ကိုမထွက်ခင်အထဲကို ၀ င်ဖို့နည်းနည်းစောင့်ရလိမ့်မယ်.
Toledo ရာသီဥတုသာယာသည့်နေ့ကိုရွေးရန်အကောင်းဆုံး, နှင့်အပြင်ဘက်တွင်စောင့်ဆိုင်းသာအတွင်းပိုင်းပေါ်တွင်သင်တို့အဘို့အရာ၏မျှော်လင့်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်, အခြားတစ်နေရာရာကိုဆုတ်ခွာရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်မပြုပါနှင့်. Mancy ၏ကင်သည် USDA အသိအမှတ်ပြု Angus ကိုတက်စေသည်, သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုသတ်ဖြတ်သည့် Angus Prime Steak နှင့် Angus Prime Steak တို့ဖြစ်သည်. ဤတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောပင်လယ်စာသည်ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့် Alaskan ဘုရင်ကဏန်းနှင့်Lစတြေးလျကျောက်ပုဇွန်.
3. Wolfgang Puck မှ CUT, စင်္ကာပူ
Wolfgang Puck သည်မိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ. သြစတြီးယားနိုင်ငံဖွားအမေရိကန်နာမည်ကြီးစားဖိုမှူးနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ၏ပထမဆုံးအာရှစားသောက်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် Marina ဂလားပင်လယ်အော်သဲထဲမှာဖြတ်, စင်္ကာပူ, တွင် 2010. CUT အင်ပါယာသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်, သို့သော်စင်ကာပူဌာနခွဲသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
နာယကသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Kobe ကိုခံစားနိုင်သည်, 300-နေ့ကစပါးကိုကျွေးမွေး Angus, သို့မဟုတ် A5 Wagyu. ဤစက်ရုံတည်ထောင်ခြင်း၏အထူးလုပ်ငန်းသည်အိမ်တွင်းဝက်အူချောင်းများနှင့် ၀ ိုင်များပြားစွာ ၀ ယ်ယူထားသောအသားအရေအတွက်များသောစတိုင်ဖြစ်သည်။.
4. Aragawa, တိုကျို, ဂျပန်
တိုကျိုရှိ Aragawa သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအကြီးဆုံးအကင်တစ်ခုဖြစ်သည်. Michelin ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်ဟာသူ့ရဲ့စားဖိုမှူးကြောင့်လူသိများတယ် – Yamada Jiro, သူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးကိုဘီအမဲသားများကိုသာထမ်းဆောင်သည်.
ဤစားသောက်ဆိုင်၏ USP သည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စ၍ စင်ကြယ်သော Tajima ကျွဲနွားများကိုမွေးမြူခြင်းဖြစ်သည် 1967. အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအထုပ်များထဲမှအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည် Aragawa ကိုဇိမ်ခံထမင်းစားခန်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်.
5. ပတေရု Luger, နယူးယောက်
ဤစီမံချက်သည် USDA ၏အဓိကအမဲသားလက်မှတ်ကိုဂုဏ်ယူသည်. သူတို့သည်အလယ်အလတ်မှအကောင်းဆုံးအသားတင်သွင်းမှုနှင့်ခြောက်သွေ့သောဝန်းကျင်ကိုဝုဏ်အတွင်းတွင်တင်သွင်းသည်. Michelin ကြယ်ပွင့်ပါသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာလည်းအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်, တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 1887.
ထိုနေရာသည်နယူးယောက်စီးတီးထမင်းစားခန်း၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါ Porterhouse ကင်, များအတွက်ဝုဏ်အတွင်းမှာခြောက်သွေ့တဲ့အသက် 28 ရက်ပေါင်း, ဂျာမန်အာလူးကြော်များနှင့်အိမ်တွင်းဝက်အူချောင်းများပါ ၀ င်သည့်အကြံပြုထားသောပန်းကန်ဖြစ်သည်.
Tuscany ရှိ Paolo Mugnai မှဖွင့်သည်, Antica Osteria သည်တံခါးများကိုဖွင့်ခဲ့သည် 2007 နှင့်တောရှိပါတယ်, အဟောင်းကိုကမ္ဘာကြီးကိုတစ် ဦး ပရီမီယံထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံအတွက်ခံစားရတယ်. အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်ကို၎င်း၏ Bistecca Alla Fiorentina ကြောင့်လူသိများသည်, နွားနို့နှင့်နွားမနှင့်အီတလီသားတုံးနှင့် Tuscan အစားအစာအတွက်အရေးပါသောပန်းကန်.
Antica Osteria တွင်ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံ၏ထင်ရှားသည့်အချက်မှာ Tuscan သံလွင်ဆီနှင့်ပင်လယ်ဆားအနည်းငယ် မှလွဲ၍ သင်ရှေ့တွင်အရိုးအသားများကိုပြင်ဆင်နေသည့်စားဖိုမှူးဖြစ်သည်။.
7. Gibsons Bar & အကင်, ချီကာဂို
ချီကာဂို၌, Gibsons Bar နှင့် Steakhouse တို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်များကိုနိုင်ငံအတွင်းပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သောစားသောက်ဆိုင်အဖြစ်ဂုဏ်ယူကြသည် ကြံ့ဖွံ့လက်မှတ် ချုပ် Angus အမဲသားသည်.
ဒီစားသောက်ဆိုင်ကို Black Angus ကျွဲနွားတွေကြောင့်လူသိများတယ်, များအတွက်ပြောင်းဖူး - ကျွေးမွေး၏ 120 ရက်များအတွက်ထို့နောက်များအတွက်ဝုဏ်အတွင်းမှာခြောက်သွေ့တဲ့ 40 ရက်ပေါင်း. ဤနေရာတွင်ချီကာဂိုရှိဒေသခံများသည် WR ၏ချီကာဂိုဖြတ်ထားသောအသားအားဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်, ဘေးထွက်အပေါ်ကို double- ဖုတ်အာလူး, နှင့်ကျော်ကြားသော Gibsons ဆားဆား.
8. အဆိုပါ Grillhouse, ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်
Johannesburg ရှိ Grillhouse ကိုတောင်အာဖရိကတွင်အကောင်းဆုံးအကင်စားသောက်ဆိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်. New York စတိုင်လ်ကင်အိမ်သည်ကမ္ဘာအဆင့်အမွှေးအကြိုင်လွှာများနှင့်အကောင်းစားနံရိုးများပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။ ဒေသခံဝိုင်.
ဤနေရာသည်နှေးကွေးနေသောနံရိုးနံရိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်, အရာဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုးအကြားကနေအနိမ့်မီးလျှံပေါ်ကင်ဖြစ်ပါတယ် 12 နာရီ. အခြားနေရာတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသောအရိုးများနှင့်အဖုများပါ ၀ င်သည်. ဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုထူးခြားစေတဲ့အကောင်းဆုံး ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူတောင်အာဖရိကသားရဲအမဲသားကင်များဖြစ်သည်.
9. La Cabana, Buenos Aires, အာဂျင်တီးနား
ကျနော်တို့မိတ်ဆက်စကားတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အာဂျင်တီးနားသည်ဒေသတွင်းအရသာရှိသောနူးညံ့။ အရည်ရွှမ်းသောအမဲသားကိုထုတ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်. La Cabana သည် Buenos Aires တွင်အကျော်ကြားဆုံးစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်, မြို့၏အပေါဆုံးနေရာ၌တည်ရှိသည်.
ဒီစားသောက်ဆိုင်ကမနက်စာအတွက်အကင်စားပေးတယ်, နေ့လည်စာ, နှင့်ညစာစား. အချို့သောလွယ်ကူသောအကြံပြုချက်များမှာ T-အရိုးကင်ဖြစ်သည်, အမဲသား, နံရိုးနံရိုး, နှင့်ပါးလွှာသောချွတ်နံရိုး. စားသောက်ဆိုင်သည်သင်၏ကင်နှင့်အတူသွားရန်ဒေသထွက်ကောင်းသောဝိုင်များစွာကိုစုဆောင်းထားသည်.
10. ကုပ္မဏီ, လီယွန်, စပိန်
လီယွန်အတွက်အယ်လ် Capricho, စပိန်, ဒါဟာလုံးဝရိုက်နှက်ပုဒ်ချွတ်ရဲ့ကတည်းကအသားချစ်သူများအားဖြင့်ဘုရားဖူးစဉ်းစားသည်, လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ဝေးကွာသည် ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု စပိန်တွင်. Leon တွင်တည်ရှိသည်, အယ်လ် Capricho ကို Jose Gordon ကစီမံသည်, စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်, စားဖိုမှူး, နှင့်လယ်သမား.
အသက် ၇ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အကြားအိုင်ဘီယန်ကျွန်းဆွယ်မှနွားအဟောင်းနှင့်နွားအဟောင်းများမှမွေးမြူထားသောအသားများမှာစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည်။. တခါသတ်, အမဲသားသည်ခြောက်သွေ့သည် 160 ရက်ပေါင်း, သောစံထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်. နာယက T- အရိုးတို့ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်, entrecote, သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းမီးကင်အပေါ်စုံလင်ဖို့ sirloin, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒေသခံစပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်နှင့်အတူတွဲ.
ဤသည်မှာကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးမှကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုနိဂုံးချုပ်သည် 10 အကောင်းဆုံးကင်. သင်ကိုယ်တိုင်ချစ်သူတစ် ဦး ဟုယူဆပါက, ဤအရာများအားလုံးသည်သင်၏ရေပုံးစာရင်းတွင်ရှိသင့်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့တွေမင်းရဲ့ foodie ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့ကူညီပေးလို့ဝမ်းသာပါတယ် 10 ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအကင် ၁၀ မျိုး” ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်တင်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fbest-steakhouses-world%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
BestSteakhouses BestSteakhousesWorldwide အသားစားသည် MeatEaters Steak အကင်
A part-time traveler and explorer who loves to share her experience in her writing. I believe in expressing my views firmly and standing by my actions - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ရေဗက္ကာကိုဆက်သွယ်ပါ